यसरी गर्भवती बनायो भेटिएको सीमकार्डले | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
यसरी गर्भवती बनायो भेटिएको सीमकार्डले
प्रकाशित मिति २५ पुष २०७४, मंगलवार २०:३५ लेखक Nepali Janta
काठमाडौं । पारिवारिक विखण्डन वा समस्याले आवासगृहहरूमा पुगेका बालबालिकाको कथा सुन्नुभएको छ ? उनीहरूको पीडाले भन्छ– दुःख यस्तोसम्म भोग्नुपर्छ ।
बाबुआमा दुवै बेपत्ता भएपछि उनीहरू कैलालीको साविक गोदावरी गाविस ८ मा बड्डीबज्यै अर्थात् आमाकी हजुरआमासँग बस्दै आएका थिए । ती बालबालिका राखेबापत नातिनी बुहारीको गाली खानुपरेपछि बड्डीबज्यैले उनीहरूलाई सुरक्षित आवास गृहमा ल्याएर राखिदिएकी हुन् । त्यसपछि उनीहरू यो अस्थायी केन्द्रलाई नै आफ्नो सधैंको घर ठान्दछन् । दुवै दाजुबहिनी अहिले अत्तरियाकै एक विद्यालयमा दुई कक्षामा पढ्छन् ।
मनिषा श्रेष्ठ (१८) ः एउटा प्रतिनिधि कथा
जन्मेको दुई महीनामै आमाले मलाई छाडेर दोस्रो बिहे गर्नुभएको ? त्यतिबेला बुबा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो ? मलाई हजुरआमाले हुर्काउनुभएछ । म तीन वर्षकी हुँदा बुबाले विदेशबाट आएर मलाई पोखराको न्यू लाइफ बालगृहमा राखिदिनुभयो । ६ महीना बसेर फेरि विदेशै जानुभयो । त्यसपछि बुबासँग फोनमा सम्पर्क भइरहन्थ्यो । एक–दुई पटक उहाँले नेपाल आएर मलाई भेट्नु पनि भयो ।
आठ वर्षकी छँदा एक दिन मैले उहाँ विदेशमै बित्नुभएको खबर पाएँ । त्यसपछि म सधैंका लागि एक्ली भएँ । ११ वर्षको उमेरसम्म त्यही बालगृहमा बसें । नजिकैको इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविबाट ७ कक्षा पास गरें । बालगृहमा सँगै बस्ने र मसँग एकदमै मिल्ने साथी यशोदा गिरीलाई एक अमेरिकी दम्पतीले धर्मपुत्री बनाएर अमेरिका लगेपछि म झन एक्लिएँ ।
हाम्रो भेट अमृता गिरी नामकी एकजना दिदीसँग भयो । पोखराकै लामाचौरमा उनको होटल रहेछ । उनले हामीलाई त्यहीं लगिन् । पुगेकै दिन मेरी साथी समीक्षालाई एउटा केटा मान्छेले लिएर गयो । त्यसपछि ऊसँग मेरो भेट भएन । म चाहिं दुई वर्षसम्म त्यहीं काम गरेर बसें । दिनभरि होटलका भाँडा माझे बापत म बिहान–बेलुका खान पाउँथें ।
मैले फोन गरेको नम्बर कञ्चनपुर, गुलरियाको महुवाफाँटा निवासी आशिष चौधरीको रहेछ । ऊ सीमकार्ड लिने बहानामा मलाई भेट्न पोखरा आयो । मसँग प्रेम प्रस्ताव राख्यो । मैले अस्वीकार गरें तर उसले ढिपी नछाडेपछि बुटवल गएर मैले ऊसँगै विवाह गरें । त्यसपछि पोखरामा सँगै बस्न थालें । शुरूका ५ -६ महीना राम्रै रहेको सम्बन्ध त्यसपछि धागो चुडिय झै भयो ।
उन्नति चौधरीः खोज पत्रकारिता केन्द्र (बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)
Post View Count: 154
भारतको जेपी कम्पनीको माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकृत, जेपी इन्डियाका पक्षधर कुलमान संकटमा
काठमाडौं । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो टेन्डरको काम अगाडि नबढाउन माग गर्दैै परेको रिटमा पाटन…
नेपालगन्जमा गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित
नेपालगन्ज । अधिक गर्मी र दिउँसो चल्ने हल्का तातो हावाका कारण बाँके जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका —संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको…
कालिगण्डकीको बाढीले सडक बगाउदा यात्रु र पर्यटकहरुको बिचल्ली (भिडियो सहित)
म्याग्दी | कालिगण्डकीको बाढीले सडक बगाउदा यात्रु र पर्यटकहरुको बिचल्ली भएको छ | पुरा समाचार हेर्नुहोस – भिडियो सहित…
भ¥याङबाट लडेर लामिछानेको मृत्यु
दमौली । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता ६८ वर्षीय भूमिनन्द लामिछानेको विहीबार राति भ¥याङबाट लडेर मृत्यु भएको छ ।
चीनले ओलीलाई निम्तो पठाएन, भारत भ्रमण बिथोल्न राजदूत सक्रिय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले चैत २३ देखि २५ सम्म भ्रमणको निम्तो दिइसकेको छ ।
ओलीकै ग्राण्ड डिजाइनमा भारतले…